कसरी स्थापना गर्ने FSX विन्डोज 8 / 8.1 / 10 मा?
2- जब स्थापना समाप्त हुन्छ, दाँया क्लिक गर्नुहोस् « fsx.exe »(तपाईं यहाँ फेला पार्न सक्नुहुनेछ: C: \_ प्रोग्राम फाईलहरू (x86) \_ माइक्रोसफ्ट गेम्स \_ माइक्रोसफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर एक्स)। यहाँ, «अनुकूलता» ट्याब छनौट गर्नुहोस् र विन्डोलाई तल देखाइएको अनुसार सेट अप गर्नुहोस्।
3- डाउनलोड 32 «को संस्करण बिट UIAutomationCore », फाइल अनबिप गर्नुहोस् र यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् FSXको मुख्य फोल्डर (सी: \_ प्रोग्राम फाईलहरू (x86) \_ माईक्रोसफ्ट गेम्स \_ माइक्रोसफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर एक्स \_)। यसले अप्रत्याशित क्र्यासको समस्यालाई सच्याउँदछ FSX.
आइतबार अगस्त 09	by rikoooo